an-trano > Travel Europe > 5 Best Places hihinana Ice Cream In Eoropa
Train Travel, Fiaran-dalamby Britain, Fiaran-dalamby Frantsa, Fiaran-dalamby Alemana, Fiaran-dalamby any Italia, Fiaran-dalamby Switzerland, Torohevitra toro-lalana amin'ny lamasinina, Train Travel UK, Travel Europe
Ny gilasy mahafinaritra dia tsy zavatra ampifandraisin'ny maro amin'i Alemana. na izany aza, Ballabeni Gilasy eto hanova izany sy ny tsy mampino Mandavaka. Ity aisy gilasy miavaka amin'ny gilasy ity dia any Munich no misy azy. Amin'ny efi-trano dia an'i Giorgio Ballabeni, ny grandmaster ao amin'ny kanto ny fanaovana gilasy. Nanomboka ny gilasy ho fialamboly izy, ary ny rehetra dia feno fisaorana Munich ho azy. Maro ny mpizaha tany sy ny mponina tia ny fivarotana, mamela hevitra tsy mampino. Rehefa hizahanao toetra ny gilasy, Tsy sarotra ny mahita ny antony. Efa honed ny asa tanana ho lavorary, ary dia iray amin'ireo tsara indrindra eo amin'ny saha. Ny fitiavany dia tonga amin'ny alalan'ny isaky ny scoop. Ny tombony fanampiny dia fa manana ny gilasy kamiao ary mety cater amin'ny antoko tsy miankina!
Tokony hahita ny tenanao ve ianao tao an-drenivohitra ny Hongria, ho azo antoka mba hitsidika Gelarto Rosa. Zavatra tsy mahagaga fivarotana gilasy any amin'ny am-Budapest. Izy ireo momba ny fomba amam-panao rehetra, firaisana ara-nofo, olon-tiany, sy ny fitiavany, izay hita ao amin'ny asany. Raha lazaina amin'ny fomba hafa, izy ireo tena manam-pahaizana any an-tsaha. Raha ny ny gilasy, ianao dia ho faly nandre fa mampiasa afa-tsy ny tsara indrindra organika fangaro. Lehibe rehetra gilasy tsena fialana solon gilasy. na izany aza, Inona no mahatonga Gelarto Rosa tsy manam-paharoa ny mpanao asa tanana dia fomba mamolavola ny gilasy any amin'ny raozy. Raha any Szent Istvan ianao Kianja mandritra ny andro mafana, ho azonao antoka fa hahita olona marobe miaraka amina gilasy miendrika raozy mandehandeha.
Ny trano gilasy tsy maintsy tsidihina manaraka dia avy any Zurich. Hasta dia gilasy efi-trano izay nahazo ny aingam-panahy avy any Arzantina. Ny mpanorina Rofe Bote nipetraka tao nandritra ny roa taona mahery ary nentiny teny an ny kolontsaina. Dia talanjona izy nahita ny Tsirom, mamelombelona, ary voajanahary gilasy. Niaiky volana izy, ka dia nitondra azy ho any Soisa. Amin'izao fotoana izao dia misy toeram-pivarotana roa any Zurich, ary hiandrandra ny Arzantina fakany. Ny mozika sy ny velona Latina mihevitra Azo antoka fa hampitraka ny fanahy kokoa rehefa hahazo ny sasany matsiro gilasy. Hasta dia tsara nafangaro Arzantina tsirony sy ny fahaizan'ny Soisa.
Tianao ve mba hiraketana ny bilaogy lahatsoratra “5 Best Places hihinana Ice Cream In Eoropa” tao amin'ny toerana? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome voninahitra fotsiny amin'ny rohy amin'ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-places-eat-ice-cream-europe%2F%3Flang%3Dmg– (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
#mampangatsiaka	#gilasy	#traveleurope	eurotrip	Tendan-kanina
Business Travel ny Train, Train Travel, Train Travel Austria, Fiaran-dalamby Britain, Fiaran-dalamby Frantsa, Fiaran-dalamby Alemana, Fiaran-dalamby any Italia, Train Travel UK, Travel Europe
Train bola, Train Travel, Torohevitra toro-lalana amin'ny lamasinina, Travel Europe